Taliyihii Amniga Deegaanka Leego Oo Geeriyooday. – Calamada.com
Taliyihii Amniga Deegaanka Leego Oo Geeriyooday.
Wararka laga helayo gudaha xerada Xalane oo ku dhex taala gudaha garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xeradaasi uu ku dhex dhintay taliyihii dhanka amniga dowlada Ridada federaalka ugu magacownaay deegaanka Leego ee gobalka Shabeelada hoose.
Taliyaha ku dhintay isbitaalka ciidamada Kufaarta Afrikaanta ay ka dhex sameysteen xerada Xalane ayaa lagu magacaabi jiray Cabdi Kuulow kaasi oo maalmihii u dambeeyay lagu dabiibayay isbitaalka shisheeyaha ee xarada Xalane.
Labadii maalin ee lasoo dhaafay dhaqaatiirta gaalada ee isbitaalka xerada Xalane iyo qaar ka mid ah ehelada iyo asxaabta taliyaha dhintay ayaa ku muransanaay in lugta laga jaro taliyaha iyo inkale maadaama dhaawac culus uu kasoo gaaray.
Cabdi Kuulow ayaa maalmo ka hor ku dhaawacmay qarax culus oo lagula beegsaday goob isaga iyo saraakiil kale ku shirayeen oo ku taala gudaha deegaanka Leego ee gobalka Shabeelada hoose.
Previous: C/Raxmaan Cabdi Shakuur “Shacabka Soomaaliyeed Maxkamadaha Islaamiga Al Shabaab Ayay Cadaalad U Raadsadaan Waana Ku Kalsoonyihiin” Dhageyso.
Next: Weerar Askar Lagu Dilay Oo Gobalka Bakool Ka Dhacay.